Budata Gravity Square APK maka Android
Budata Gravity Square
Budata Gravity Square,
Gravity Square bụ egwuregwu gam akporo nwere egwuregwu siri ike nke na-eme ka egwuregwu ochie a na-ahụ anya yie ihey. Egwuregwu ị na-agbalị inwe ọganihu site nịgbanwe etiti ike ndọda gị nelu ikpo okwu nwere usoro nwere ike iji otu mkpịsị aka mee ngwa ngwa, ma ị gaghị ewepụ anya gị na ihuenyo; Ị na-amalite ọzọ na ntakịrị ihe ndọpụ uche.
Nime egwuregwu ahụ, nke m na-ahụ na ọ bụ nnukwu nha dị ka ọdịdị anya ya si dị, ị na-agbalị ịkwalite ihe odide ahụ, gụnyere onye ọchụnta ego, dike, onye nkụzi, onye ọrụ, ninja, nelu ikpo okwu dị warara dị warara dị ka o kwere mee. Mgbe ị banyere egwuregwu ahụ maka oge mbụ, a ga-egosi gị otu esi aga nihu. Mgbe ị na-amafe akụkụ nkuzi dị mfe, ị na-ahụ na e mere egwuregwu ahụ na ihe isi ike na-akụda mmụọ.
I kwesịghị iweta mkpụrụedemede ị na-achịkwa site notu ihu na ihu na mkpụrụ ọnụọgụ. Ihe odide anyị, ndị na-enweghị ike ịwụli nzọụkwụ ahụ, nwere ike ịga nihu nihu, dabere na ọnọdụ ahụ.
Gravity Square Ụdịdị